Dhaamsaa Waliif Dabarsaa!! Yeroo Oromoo Tahanii Dhalachun,Guddachuun Akkasumaas Jirachun Yakkaa Tahee Bara Yeroo Kamiyyuu Caalaa Oromoo fi Oromiyaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhaamsaa Waliif Dabarsaa!! Yeroo Oromoo Tahanii Dhalachun,Guddachuun Akkasumaas Jirachun Yakkaa Tahee Bara Yeroo Kamiyyuu Caalaa Oromoo fi Oromiyaa
Yeroo Oromoo Tahanii Dhalachun,Guddachuun Akkasumaas Jirachun Yakkaa Tahee Bara Yeroo Kamiyyuu Caalaa Oromoo fi Oromiyaa Akkaa Diinattii Ilaalee fi Duguggaa Sanyii Ummataa Irrattii Labsee Lubbuun Oromoo Sareellee ittii hanqattee bara oromoo dhaaf Gaddaa fi Naasuu Akkasumaas Du’aa fi Reebichaa Faallaa kana Diinaa Oromootiif Gammachuu,Badhadhinaa fi Olantummaa tahe.kanaf bara fuggisoo keeysaa jirraa waan taheef fallii jiru tokkoo inniiniis Faalmachuu Qofaa.
Cibiraan shanan gibee
Injifannoo WBO g/jimmaa aanaa limmuu saqqaa ganda maroo jedhamutti
April 11/2021 jechuun guyyaa har’aa
Mooraa qabsoo bilisummoa oromoof galii gochuu danda’ee Jira.
Kaadireen OPDO gaafa sabboonaa of fakkeessuu barbaaddu ABN abaaruudhaan of mi’eessuu yaalti.
Hin gowwoomfaminaa! Hin sobdi! OPDO/Bilxiginnaan sabboontota keenya dhugaa mana hidhaatti naqxee bobaa EZAMA jala suuqamtee bultu ABN abaaruuf hamilee homaatuu hin qabdu. Bolola aangoo dhuunfaaf yoo taate malee. Osoo dhuguma quuqama Oromummaa ABN ittiin abaartu qabaattee fi hegeree Oromiyaa fi Oromoof kan yaaddoftu taatee, qabsaayota obbolaa tahaniif hin hiitu ture. Yoo dogoggoraan itti fakkaanaan hiites wayta kanatti ofiifuu jettee hiikti ture. Obbolaa Oromoo karaan hundi baasuu didnaan qabsoo Hidhannootti jiran busheessuuf sagal ”Shanee shanee” jettee maqaa hin nyaattu ture. Diina fagoo waamtee hin waraansiftu ture. Haqa dubbachuuf ABN fagoo jiru caalaa EZAMA OPDO waliin harka tokko tahee Oromiyaa dhuunfatee jirutu Oromoof balaa guddaa dha. Ummata keenya yeroo hundumaa kan nyaatu alagaa fagoo dhufe osoo hin taane diina gara laafessa fakkaatee akka buuqqachaa bobaa isaa seenu dha.
Abi Ahmadii fi Biraanuu Naggaa diraamaa ‘filannoo’ Oromoo keessaa yaasanii humnaan geggeeffatan kanarratti waadaa gurguddoo waliif seenanii jiru. Dorgoommiin Bilxiginnaa fi EZAMA gidduutti tahu tapha waldhaansoo obbolaa lakkuu lama gidduutti tahurraa adda miti. Imaammata tokkicha tumatanii waliin deemaa jiru. Ummatatti fakkeessuuf maqaa gosa lamaan fiigu malee galiin isaanii tokkicha. Itoophiyaa Mangistuu Hayla Maaram deebisuu dha. Lachuu gobla bitaa fi mirgaa waan tahaniif sagalee walii dhiisuu yookiin walitti ida’achuun mootummaa waloo tolfachuuf walii galtee iccitaawaa qabu. Akeekni guddaan Oromummaa gad fageessanii owwaaluun Itoophiyaa kaleessaa ol kaasanii HEERAAn dhaabuu dha. Inni kun akka milkaahuuf ”koottaa filannoo hirmaadhaa shumata keenya mallattoo keessaniin nuu raggaasaa” jechuun Oromootti qoosaa jiru. Oromoon filannoo jaraarraa qooda fudhachuu yaadde osoo booda gaabbiidhaan quba ofirratti hin nyaatin harka kee sassaabbadhu. Isa kabaja dhugaa sitti horuuf siif wareegamaa jiru WBO kee jabeessi!
Guyyaa Arraa Miseensotni Humna Addaa 29 WBOtti makaman Miseensotni Humna Addaa Poolisii Oromiyaa sakatta’insa WBOf bobbaafaman 29 hidhannoo isaanii guutuu waliin WBOtti makamanii jiran.Kana irraa kan ka’e miseensotni humna addaa Oromiyaa kilaastera lixaa raayyaa ittisa biyyaa keessa akka facaaafaman murteeffamus diddaan mudatee jira.Miseensotni humna addaa 682 tahan raayyaa ittisaa keessa akka bittinfaman yaadni dhiyaate miseensota kanneen biratti fudhatama dhabeera.
OBN Ebla 03,2013- Rakkoo nageenyaa Naannoo Oromiyaafi Amaaraatti mudatu bu’uurarraa hiikuuf waliin mari’achuufi rakkinicharratti waliin hojjachuuf mariin Itti gaafatamtoota Waajjiraa Paartii Badhaadhinaa Godinaaleefi Aanaalee Naannoo Oromiyaa fi Amaaraa jidduutti Finfinneetti taa’ameera.
Haala nageenyaa harcaatuu Juuntaan deeggaramaa sabaafi saba walitti buusuu, dhimmi hidha haroomsa guddicha Itiyoophiyaa, koronaa fi dhimma Filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa filatamuuf jiru bu’uureffatee dhiibbaan guddaa jiraachuu, Itti gaafatamaa Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa, Obbo Fiqaaduu Tasammaa himaniiru.
Rakkoo Naannoo Oromiyaafi Amaaraa keessatti mudatu hambisuuf Paartii badhaadhinaa tokkoo jala teenyee yaadamoota gargara bahuu paartichaa fakkeessan hambisuufi rakkinichas bu’uurarra hiikuufii jedhan. Walitti dhufeenya Godinaaleefi Anaalee ollaa ta’an jidduutti hojjatamaa jirus abdachisaa ta’uu, Obbo Fiqaaduun himan. Uummanni Oromoofi Amaaraa rakkoo tokkoyyu akka hin qabneefi rakkichi diinoota seenaatiin kan uumamaa jiru ta’uu, Itti gaafatamaa Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Naannoo Amaaraa,Obbo Abrahaam Allahanyi himan.
Akka Paartii Badhaadhinaatti rakkoolee mudatan kana furuuf waliin mari’achuun jalqabame kan itti fufuu fi sababa rakkoo kanaan lammiilee buqqa’an gara qe’eefi qabeenya isaanitti deebisuunis itti fufa jedhan. Balaay Tasammaatu gabaase.